Zithini iiVithamini zewebhu eziPhambili zikaGoogle kunye namava ePhepha? | Martech Zone
UGoogle wabhengeza ukuba iiVitals zeWebhu eziPhambili ziya kuba yinto esezingeni ngoJuni 2021 kwaye ukukhutshwa kulungiselelwe ukugqitywa ngo-Agasti. Abantu kwiWebhusayithiBuilderExpert babeke ndawonye le infographic ebanzi ethetha kwiGoogle nganye IiVithamini zeWebhu ezingundoqo (I-CWV) Kunye Amava ephepha Iimpawu, indlela yokulinganisa, kunye nokwenza ngcono kolu hlaziyo.
Zithini iiVithamini zewebhu eziPhambili zikaGoogle?
Iindwendwe zendawo yakho zikhetha iisayithi ezinamava amakhulu ephepha. Kwiminyaka yakutshanje, uGoogle wongeze uninzi lwale migaqo yamava omsebenzisi njengezinto zokubeka iziphumo. UGoogle ubiza ezi IiVithamini zeWebhu ezingundoqo, iseti yeemetrikhi ezinxulumene nesantya, ukuphendula, kunye nozinzo olubonakalayo, ukunceda abanini besiza ukulinganisa amava omsebenzisi kwiwebhu.
Uphendlo lukaGoogle oluphakathi
IiVithamini zeWebhu ezingundoqo iseti yelizwe lokwenyani, metric ezijolise kubasebenzisi ezilinganisela izinto eziphambili kumava omsebenzisi. Balinganisa ubungakanani bokusebenziseka kwewebhu njengexesha lokulayisha, ukunxibelelana, kunye nokuzinza komxholo njengoko ulayisha (ukuze ungalicimi ngempazamo eli qhosha xa litshintsha phantsi komnwe wakho- iyacaphukisa!).
IiVitamin zeWebhu ezingundoqo zibandakanya iimethrikhi ezi-3 ezifutshane:
Eyona Paint inkulu (LCP): amanyathelo kulayishwa ukusebenza. Ukubonelela ngamava omsebenzisi afanelekileyo, i-LCP kufuneka yenzeke ngaphakathi 2.5 imizuzwana ukuba iphepha liqala nini ukulayisha.
Ukulibaziseka kokuQala kokuQala (FID): amanyathelo ukungasebenzi. Ukubonelela ngamava omsebenzisi olungileyo, amaphepha kufuneka abe ne-FID ye I-100 millisecond okanye ngaphantsi.
Ubume boBume beShift (CLS): amanyathelo uzinzo olubonakalayo. Ukubonelela ngamava omsebenzisi olungileyo, amaphepha kufuneka agcine i-CLS ye 0.1. okanye ngaphantsi.
Unokufumana ingxelo kwezi metriki usebenzisa izixhobo zikaGoogle ezinamaphepha okuqonda okanye ingxelo yeCit Vitals kwiGoogle Search Console.
Ingxelo yamaphepha eGoogle aNgaphakathi Ingxelo kaGoogle yoKhangelo lweCWV
Zeziphi izinto ezinokuthanani namava kaGoogle?
The amava ephepha imilinganiselo yemiqondiso kwimiba yendlela abasebenzisi abona ngayo amava okunxibelelana nephepha lewebhu. Ukulungiselela ezi zinto kwenza ukuba iwebhu ibonwabe ngakumbi kubasebenzisi kuzo zonke izikhangeli zewebhu kunye nomphezulu, kwaye inceda iisayithi ziguqukele kulindelo lomsebenzisi kwiselfowuni. Siyakholelwa ukuba oku kuya kuba negalelo kwimpumelelo yeshishini kwiwebhu njengoko abasebenzisi bekhula bezibandakanya ngakumbi kwaye banokuthi bathathe inxaxheba kungquzulwano oluncinci.
Yeyiphi impembelelo yeWebhu yeVital SEO kwiWebhusayithi?
Sebenzisa imizobo eneenkcukacha manani, uphando lwantlandlolo, kunye neengcebiso ezinokubakho, infographic Yeyiphi eyona nto ibalulekileyo kwiWebhu yeVital SEO kubakhi beWebhusayithi Ukophula iiVitals zeWebhu zikaGoogle ezintsha kunye nohlaziyo lwamava ePhepha, indlela i-CWV ethe yaba nefuthe ngayo kwintsebenzo yomakhi wewebhusayithi ye-ecommerce, kunye nendlela yokwenza iwebhusayithi eyenziweyo kusetyenziswa umakhi wabo.
Nantsi into ebandakanyiweyo kwi-infographic, (ngokutsiba amakhonkco kumacandelo afanelekileyo esikhokelo somthombo):
Ukwahlukana yeeVitamin zeWebhu eziPhambili zikaGoogle kunye nohlaziyo lwamava ePhepha kunye nendlela ezisebenza ngayo
Insight kwimpembelelo yaBakhi beWebhusayithi kunye neeCWV Pros / Cons zabo
Uhlalutyo lweWebhusayithiBuilderExpert I-7 yee-Ecommerce Website Abakhi - Shopify, Wix, BigCommerce, Isikwati, iShift4Shop, Volusion, Isikwere esikwi-Intanethi (ii-URL ezingama-3000 +) - kuvavanywa i-CWV, amaXesha okuPhendula ngeServer, kunye neNqaku lokuSebenza, kwidesktop nakwiselfowuni
Uvavanya njani iwebhusayithi yeeVitals zeWebhusayithi
Iingcebiso zokusebenzisa kubakhi bewebhusayithi / iiwebhusayithi
Nantsi i-infographic epheleleyo, qiniseka ukuba ucofa kwi-athikili yabo ebanzi ephula icandelo ngalinye kunye nendlela onokukhetha ngayo Inkqubo yolawulo lomxholo (i-CMS) ekwaziyo ukukhangela ngokupheleleyo.
tags: Iimpawu eziphambili zewebhucwvdesktop vs mobilekosongekekoiFiduphandoUkuqonda okwenziwe ngamaphepha kuGoogleUkuKhangela okuKhuselekileyo kuGoogleuxinzelelo lomfanekisoipeyinti enkulu umxholomobile-ubuhloboamava ephephauhlaziyo lwamava ephephaUkuqonda okwenziwe kwiphephaukhuselekoSEOisantya sendawowebsitewix
Iindlela ezi-3 zoKwakha iNkqubo yokuThengisa eyiNtetho